Kooxda Inter Milan oo shaacisay inay dhisanayso Garoon Cusub | Starfm.co.ke	Tuesday, May 21st, 2013	Home
Kooxda Inter Milan oo shaacisay inay dhisanayso Garoon Cusub
Share04.Jun.2012:- Kooxda Kubadda Cagta ee Reer Talyaani Inter Milan ayaa shaacisay inay doonayso in ay dhisato garoonka ay si gooni ah u yeelado,waxa ayna sheegtay in dhawaan uu qorshahaasi bilaabanayo.
Inter Milan ayaa haatan wada dadaal dheer oo ay ugu jirto sidii ay u dhisan lahayd garoon ay si madax banaan u yeelato maadaama haatan ay garoonkeeda iskula ciyaaraan kooxda Milan.
Gazeedka Corriere dello Sport ayaa maanta soo bandhigay qorshahaasi ay Inter iminka doonayso oo uu shaaciyay in ay bilabayso hirgalintiisa sanadka sanadka 2016.
Si kastaba Naadiga Nerazzurri ayaa haatan diyaar u ah dhisme cusub oo ay ku doonayso yeelashada garoonka u qaas ah waxayna doonaysaa inay isaga tanasusho qaybta ay ku eledahay garoonka Sansiro ee Milan ay la wadaagto.
qoyska iska Leh Milkiyada Inter ayaa sidoo kale dadaal ugu jira sidii ay u kobcin lahaayeen hanaanka dhaqaale ee kooxda waxayna horay ugu dhiseen shirkado iyo dadalo kale oo ay taas ku doonayaan.
waxa ay xuseen in ay amainsanyihiin in hada la joofo waqtigii Inter ay yeelan lahayd Stadiu ay gooni ugu ciyarto taas oo ays heegeen inay ka dhabaynayaan Bilowka Xili ciyaareedka 2016-17 .
Qaar ka tirsan Kooxaha Talyaaniga ayaa bilaabay yeelashada garoomo Cusub iyadoo Talyaaniga Kooxaha ka dhisan garoomada si mataano ah isugula leeyihin.
Kooxda Rer Talyaani ee Juventus ayaa dhawaan daaha ka qaaday kuna ciyaartay xili ciyaareedkaan garoon cusub oo leh baaxad ahaan 41,000 oo Kursi waxayna ku ciyaartay xili ciyaareedkaan dhamaaday ee 2011-12 .
Ms Amina ...	Madaxwayne Kenyatta oo digniin u diray burcada danbiyada gaysata	May 20, 2013 Madaxwayne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dowlada ay wax waliba oo karaankeeda ah samayn doonto si loola dagaalamo ...	Sports	Falcao ” Warka Mustaqbalkeyga Laga Sheegey Waa Been Abuur ”.	May 18, 2013 Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Radamel Falcaoayaa beeniyay in uu wax ka og yahay in ay jiraan wadahaadlo uu ...	Seedorf Oo Loo Badinayo Inow Tababara Ka Noqdo Kooxda AC Milan	May 18, 2013 Mulkiilaha kooxda Milan Silvio Berlusconi ayaa dhawaan sheegay in tababare Massimiliano Allegri uu ka tagayo kooxda isla markaana ...	Tababarahii Hore Ee Kooxda AC Milan Massimiliano Allegri oo U Wareegay Kooxda Roma	May 18, 2013 Mulkiilaha kooxda Milan Silvio Berlusconi ayaa tibaaxay in tababaraha kooxda Massimiliano Allegri uu u wareegayo kooxda Roma marka ...	David Moyes Kulanka So Socoto Maxoy Samedonaa ?? Maxadna Ku Qiyaasi Karta ?	May 18, 2013 Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United, David Moyes ayaa diyaar u ah in uu bilaabo shaqada kooxda United ...	Xidiga Barcelona Andres Iniesta Oo Aan Ku Faraxsaneyn La Joogitanka Kooxdaasi	May 18, 2013 Ninka labaad ee ugu wanaagsan kooxda Barcelona Andres Iniesta ayaa sheegay in uusan ku faraxsaneyn xiligan Barcelona .